QM iyo Midowga Afrika oo ka wada hadlay xoojinta ammaanka Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
QM iyo Midowga Afrika oo ka wada hadlay xoojinta ammaanka Soomaaliya
By Abdi Malik	 On Oct 9, 2017
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay Arrimaha Soomaaliya Amb. Micheal Keating iyo Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Francisco Caetano Madeira ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Kulanka oo sidoo kale ay qeyb ka ahaayeen saraakiil kale oo ka kala socotay Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, socdayna mudo saacado ah ayaa waxaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta labada dhinac, xasiloonida Soomaaliya, iyo in la dardar geliyo arrimaha ammaanka.
Danjire Madeira ayaa sheegay shaqada AMISOM ay u joogto Soomaaliya in ay tahay nabadeynta dalka iyo la dagaalanka ururka Al-shabaab, isaga oo sidoo kale tilmaamay howlgalka ciidamada AMISOM in uu wajahayo marxalad cusub.
Wuxuu kaloo sheegay Francisco Caetano Madeira in dhowaan ay qorsheynayaan qaadista dagaalo lagu wajahayo Ururka Al-shabaab, si taasi ay u hirgashana Beesha Caalamka oo ay ugu horeyso QM ayuu ka dalbaday in ay siiyaan taageere dhaqaale iyo mid Millitari.
Amb. Micheal Keating Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay Arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay muhiim in ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii ay Soomaaliya u noqon lahayd Dowlad waxtar leh, oo si toos ah u qaada dhabaha Nabadda.
“Waxaan kulan la yeelanay Danjire Caetano iyo kooxdiisa, waxaan ka wada hadalnay wada shaqeynta naga dhaxeysa ee ku qotonta arrimaha Soomaaliya, ammaanka Soomaaliya, xasiloonida dalka, ujeedada kulanka wuxuu ahaa sidii loo dardar gelin lahaa nabadeynta ka socota Soomaaliya.” Ayuu yiri Keating oo war qoraal ah ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
The post QM iyo Midowga Afrika oo ka wada hadlay xoojinta ammaanka Soomaaliya appeared first on Ilwareed Online.
Kooxo hubeysan oo xalay Kantaroolka Boosaaso weeraray
Wafdi ka socoda Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo dhaweyey Mareykanka
AMISOM oo sheegtay inaysan wax eed ah ku lahayn ammaamka Caasimada Muqdisho
Press Release (immediate publication)
Abdi Malik	 Oct 23, 2017
Xaalad Adag oo ay ku sugan yihiin Ardey oo Deeq Waxbarsho ka heley…
Qoraal Facebook lagu dhigay oo ka nixiyey booliska Israel